Baabuurta Archive | Hordhac News
Casharkii 6-aad ee Wadista baabuurta (Sida gaariga loo saaro Dalcada loogana Dajiyo)
By Hordhac on September 5, 2015 Baabuurta
Waa Casharkii 6-aad ee Barshadda Baabuurta, waxaana barnaamijkaani tarjumay walaalkeen xassan Cismaan Xaaji, barnaamijkaani ayaa anfacaya dhamaan dadka doonaya barashada Baabuurta (Gawaarida) guud ahaan, gaar ahaan kuwa ku nool yurub sida Britain oo kale. Hadaba casharadaani waxaa kaaga baxaya fekrad muhiim ah, kuma koobna oo kaliya dadka Yurub oo jooga, laakiin waxaa uu anfacayaa qof […]
Casharkii 5-aad ee Wadista baabuurta ( Adeegsiga Isteerinka Gaariga)
Waa Casharkii 5-aad ee Barshadda Baabuurta, waxaana barnaamijkaani tarjumay walaalkeen xassan Cismaan Xaaji, barnaamijkaani ayaa anfacaya dhamaan dadka doonaya barashada Baabuurta (Gawaarida) guud ahaan, gaar ahaan kuwa ku nool yurub sida Britain oo kale. Hadaba casharadaani waxaa kaaga baxaya fekrad muhiim ah, kuma koobna oo kaliya dadka Yurub oo jooga, laakiin waxaa uu anfacayaa qof […]
Casharkii 4-aad ee Wadista Baabuurta ( Sida loo isticmaalo Marshada Gaariga ama Gear-ka)
Waa Casharkii 4-aad ee Barshadda Baabuurta, waxaana barnaamijkaani tarjumay walaalkeen xassan Cismaan Xaaji, barnaamijkaani ayaa anfacaya dhamaan dadka doonaya barashada Baabuurta (Gawaarida) guud ahaan, gaar ahaan kuwa ku nool yurub sida Britain oo kale. Hadaba casharadaani waxaa kaaga baxaya fekrad muhiim ah, kuma koobna oo kaliya dadka Yurub oo jooga, laakiin waxaa uu anfacayaa qof […]
Casharkii 3-aad ee Wadista baabuurta (Isticmaalka Haadadka Gaariga)
Waa Casharkii 3-aad ee Barshadda Baabuurta, waxaana barnaamijkaani tarjumay walaalkeen xassan Cismaan Xaaji, barnaamijkaani ayaa anfacaya dhamaan dadka doonaya barashada Baabuurta (Gawaarida) guud ahaan, gaar ahaan kuwa ku nool yurub sida Britain oo kale. Hadaba casharadaani waxaa kaaga baxaya fekrad muhiim ah, kuma koobna oo kaliya dadka Yurub oo jooga, laakiin waxaa uu anfacayaa qof […]
Casharkii 2-aad ee Wadista baabuurta (Adeegsiga Lugaha ee Baabuurta)
Waa Casharkii 2-aad ee Barshadda Baabuurta, waxaana barnaamijkaani tarjumay walaalkeen xassan Cismaan Xaaji, barnaamijkaani ayaa anfacaya dhamaan dadka doonaya barashada Baabuurta (Gawaarida) guud ahaan, gaar ahaan kuwa ku nool yurub sida Britain oo kale. Hadaba casharadaani waxaa kaaga baxaya fekrad muhiim ah, kuma koobna oo kaliya dadka Yurub oo jooga, laakiin waxaa uu anfacayaa qof […]
Casharkii 1-aad ee Barashada Baabuurta ( Sidee baabuurka loo kiciyaa)
By Hordhac on September 2, 2015 Baabuurta